Warshadda Xumbo Xaraashka ah - Soosaarayaasha Shirkadda Xaraashka ah ee Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaasha
wakiilka xumbaynaya microsphere waa nooc cusub oo ah wakiilka xumbada khaaska ah oo ay soo saartay JOYSUN. Waa qayb yar oo goos goos ah (muuqaalka yar waa huruud ama caddaan khafiif ah) shell qolofta kuleylka kuleylka kuleylka leh ee kululaynta ka dib, mugga wakiilka xumbaynaya ayaa si dhakhso leh u sii ballaarin kara si uu u yeesho daraasiin jeer, qolofka kubbadda yar yar ma qarxo, wuxuu weli yahay kubbad dhammaystiran oo dhammaystiran , si loo gaaro saameynta xumbada. Weli way haysaa saameynta xumbada ka dib qaboojinta mana yaraynayso. Wax soo saarka xumbaynaya ayaa ...
Bixi cabbiro kala duwan oo ah PTSS, TSH, budada bicarbonate ee wax laga beddelay iyo waxa ku jira 40% -70% masterbatch. Wakiilka xumbada cad waa wakiilka xumbada kuleylka kuleylka leh. Udgoon, waxqabadkeedu waa xasilloon yahay wuxuuna leeyahay kala firidh wanaagsan. Alaabooyinka midabkoodu wanaagsan yahay, godka xumbo si siman. Wakiilka xumbada cad wuxuu ku habboon yahay caagga iyo balaastigga caagga ah iyo xumbada caaryada cirbadeynta, muuqaalka PVC iyo xaashida xajmiga, xumbada cirbadeynta, xumbada alaabta cad, Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inuu yahay wakiilka nukleerka ee xumbada jirka ...
Wakiilka xumbada ADC ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhammaan noocyada caagga iyo wax soo saarka caagga ah. Waxaan ku siin karnaa Adc saafi ah cabbirro kala jaad ah oo kala ah 4μm, 5μm, 6μm, 8μm, 10μm iyo 12μm, iyo sidoo kale badeecooyin wax laga beddelay oo loo isticmaalo. Waxay leedahay jaangooyooyin qaybinta qayb ahaan xoog badan, firidhsan heer sare ah. Codsiyada 1. Gudiga xumbada / xayeysiinta / gudiga alaabta guriga / carmal xumada 2.PVC WPC sabuuradda 3.PS sawirka jir 4.XPE 5.PP waxyaabaha la isku duro 6.PVC kabaha
Wakiilka xumbaynaya OBSH waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro wax xiiran, wasakh la'aan ah, alaabooyin xumbayn aan qurxinayn oo leh qaab dhismeed xumbaynaya ganaax. Waxay ku habboon tahay caagga dabiiciga ah iyo caag-gacmeedyo kaladuwan oo kala duwan (sida: EPDM, SBR, CR, FKM, IIR, NBR) iyo badeecooyinka kuleylka leh (sida PVC, PE, PS, ABS).
Wakiilka xumbaynaya PVC
1.PVC guddiga xayeysiinta xumbo, guddiga alaabta guriga & guddiga dhismaha 2.PVC daaqad xumbo & albaabka profile PVC xumbo WPC
Hordhaca sheyga Wakiilka xumbaysta waxaa loo isticmaalaa Codsiga xumbada PS extrusion
Hordhaca sheyga Wakiilka xumbada waxaa loo isticmaalaa Waxqabadka PP Cirbadeynta & Xumbo xumida Waqti, gaabin waqtiga wareega, hagaaji waxtarka wax soo saarka ④ wuxuu yareyn karaa culeyska 10-30% (iyadoo kuxiran dhumucda sheyga), ka caawinta yareynta qiimaha cayriin ma ...
Soosaarida badeecada XPE waa shey kiimiko iskutallaabaysan ku leh maadada polyetylenka, Marka loo barbardhigo EPE (polyetylen xumbo jirka ku jirta, oo badanaa loo yaqaan suuf luul), Awoodda siligga ayaa ka sarreeya oo unugyadu way fiican yihiin Marka la barbardhigo walxaha kale ee PE ama non-PE, qalabka PE wuxuu leeyahay waxqabad aad u fiican oo ku saabsan adkeysiga, iska caabinta iftiinka, caabbinta saameynta jireed iyo dhinacyada kale. XPE lafteeda waxay leedahay astaamo kiimikaad oo xasilloon, ma fududa in la jajabiyo, ur la'aan, iyo dabacsanaan wanaagsan. Codsiga Waxaa ...
PC & PA & ABS wakiilka xumbada xumbada
Hordhaca badeecada Wakiilka xumbaynaya waxaa loo isticmaalaa PC & PA & ABC Waxqabadka xumbada xumbada ① Ka tirtir calaamadaha hoos u dhaca, iyo muuqaalka sheyga wax saameyn ah kuma yeelan doono hagaaji waxtarka wax soo saarka ④ wuxuu yareyn karaa culeyska 10-30% (iyadoo kuxiran dhumucda sheyga), wuxuu yareeyaa qiimaha alaabta ceeriin Codsiga PC & PA & ABS p ...
Hordhaca alaabada Wakaaladda xumbada xaraashka Astaamaha astaamaha xumbada xumi ma aha sun, sun, ur, budo yar yar, ku faafid wanaagsan polymer leh goobooyin isku mid ah. Baakadaha iyo keydinta Bacda balaastikada ah ama warqad kraft ah oo 25kgs lagu xiranayo. Xasiloonidu waxay u fiican tahay sida keydinta heerkulka qolka. Ku kaydi meel qabow oo qalalan kana fog meelaha dabka laga shido, dhimbilo iyo kuleyl. Codsiga alaabta Waxaa loo isticmaali karaa tamar cusub, militariga, caafimaadka, duulista, dhismaha maraakiibta, elektaroniga, gawaarida ...